I-Anker PowerConf C300, i-webcam ehlakaniphile nomphumela wobuchwepheshe | Izindaba zamagajethi
I-Anker PowerConf C300, i-webcam ehlakaniphile nomphumela wobuchwepheshe
UMiguel Hernandez | 01/06/2021 10:00 | Kubuyekezwe ku- 27/05/2021 20:04 | General, Izibuyekezo
Ukusebenza ngocingo, imihlangano, izingcingo zevidiyo zaphakade ... Kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi ikhamera yewebhu nemakrofoni ekhompyutheni yakho ephathekayo bezingezinhle njengoba ubulindele, ikakhulukazi manje njengoba lolu hlobo lokuxhumana kwedijithali seluvamile. Namuhla sikulethela isisombululo esikhanga kakhulu kuzo zonke lezi zifo.
Sihlaziya i-Anker PowerConf C300 entsha, ikhamera yewebhu esebenza kahle enesinqumo se-FullHD, i-Wide Angle, nezici ze-Artificial Intelligence. Thola nathi zonke izici zale divayisi eyingqayizivele nokuthi imaphi amaphuzu ayo aqinile uma kuqhathaniswa nezimbangi eziqondile, futhi namaphuzu ayo abuthakathaka.
2 Ukufakwa kanye nesoftware enziwa ngezifiso
4 Ubuhle nobubi
Sivele samazi u-Anker phambilini, kuyinkampani ethambekele ekubhejeni ngemiklamo ye-premium nangezinto ezisetshenziswayo emikhiqizweni yayo, into ubuhlobo bayo bamanani bukwenza kucace kithi. Ngokuqondene nomklamo, unefomethi ejwayelekile, sinephaneli emaphakathi lapho inzwa ibusa kakhulu enkabeni, izungezwe yiringi enemibala yensimbi lapho sizofunda khona amandla ayo. Ukuthwebula kwe-1080p (FullHD) ngamazinga wozimele we-60FPS. Ingemuva lakhiwe ngepulasitiki ye-matte enikeza ukuzwa kwekhwalithi nokuqina okuphawulekayo. Inokuvulwa kwekhebula kule ngxenye efanayo engemuva I-USB-C ezosebenza njengesixhumi kuphela.
Intambo ye-USB-C ingu-3m ​​ubude
Lesi sakamuva siyiphuzu elihle ngoba likuvumela ukuthi usebenzise indawo ethe xaxa. Mayelana nokusekelwa, inokusekelwa engxenyeni engezansi, eguquguqukayo ibe ngu-180º futhi ngentambo yesikulufu sokusekelwa noma i-tripod yakudala. Inamaphoyinti amabili okusekela anezinombolo eziyi-180º futhi ekugcineni indawo engenhla, lapho ikhamera Izosivumela ukuyizungezisa ngokuvundlile ibe ngu-300º futhi enye ibe ngu-180º ngokuqonde ngqo. Lokhu kuvumela ikhamera ukuthi iguqulwe ukuze isetshenziswe etafuleni, ku-tripod noma ngokusekelwa okuphezulu kwesibuko, lapho ingeke ithathe isikhala esikrinini.
Kulesi sici sithola ukwengeza okuthokozisayo, yize ungenalo uhlelo lokuvala ukumboza ilensi efakwe kukhamera, Yebo, i-Anker ifaka izivalo ezimbili ezinefomethi yokuhambisa ephaketheni nokuthi ziyakwazi ukunamathela, singazibeka sizisuse ngokuthanda kwensimu, ngale ndlela sizokwazi ukuvala ikhamera futhi siqiniseke ukuthi abasirekhodi, noma ngabe baxhumene nayo. Kodwa-ke, sinesikhombi sangaphambili se-LED esizosixwayisa ngesimo sokusebenza kwekhamera.
Ukufakwa kanye nesoftware enziwa ngezifiso
Empeleni le Anker PowerConf C300 iyi Hlanganisa futhi udlale, ngalokhu ngisho ukuthi izosebenza kahle kuphela ngokuyixhuma ethekwini I-USB-C kwikhompyutha yethu, noma kunjalo, sihambisana ne-USB-C eya ku-USB-A adaptha yamacala lapho kudingeka khona. Uhlelo lwayo lobuhlakani bokuzenzela kanye namandla we-autofocus kufanele lwanele osukwini lwethu nosuku. Kodwa-ke, kubalulekile ukuba nesoftware yokusekela, kulokhu esikhuluma ngakho AnkerWork ongayilanda mahhala, kuyo sizothola izinketho eziningi, kepha into ebaluleke kakhulu kungenzeka ukubuyekeza isoftware ye-webcam futhi ngaleyo ndlela yengeze ukusekelwa kwayo.
Kule software sizokwazi ukulungisa ama-engeli amathathu wokubuka we-78º, 90º no-115º, kanye nokukhetha phakathi kwezimfanelo ezintathu zokubamba phakathi I-360P ne-1080P, ngokusebenzisa ithuba lokulungisa i-FPS, ukwenza kusebenze futhi kungasebenzi ukugxila, i HDR futhi a Umsebenzi we-Anti-Flicker Kuyathakazelisa kakhulu lapho sikhanyiswa ngama-LED, usuvele uyazi ukuthi kulezi zimo kuvame ukuvela izinkinobho ezingacasula, into esizoyigwema ngokuphawulekayo. Naphezu kwakho konke, sizoba nezindlela ezintathu ezizenzakalelayo ngokuya ngezidingo zethu okuthi ngokomqondo zisebenzise ngokugcwele i-Anker PowerConf C300:
Imodi yomuntu siqu
Sincoma uma kwenzeka unqume ngale khamera itholakala kuwebhusayithi yakwa-Anker naku-Amazon, ukuthi uyashesha ukufaka i-Anker Work bese uthatha ithuba lokuvuselela i-firmware yekhamera, njengoba kuzodingeka ukwenza kusebenze nokusebenza kwe-HDR.
Le Anker PowerConf C300 iqinisekisiwe ukuthi isetshenziswe ngendlela eyiyo nezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Zoom, ngale ndlela, sinqume ukuthi izoba yikhamera yokusetshenziswa enkulu ekusakazweni kwe-iPhone News Podcast Esivela kuyo i-Actualidad Gadget esibamba iqhaza kuyo masonto onke nalapho uzokwazi khona ukwazisa ikhwalithi yesithombe sayo. Ngendlela efanayo, sinemakrofoni ababili abanokukhanselwa komsindo okusebenzayo ukuze bathathe izwi lethu ngokucacile futhi basuse umsindo wangaphandle, into esikwazile ukukuqinisekisa ukuthi isebenza kahle ngokumangazayo.
Ikhamera Isingatha kahle ezimeni zokukhanya okuphansi ngoba inohlelo lokulungisa isithombe kulawa macala ngokuzenzakalela. Asizitholi izinkinga zokusebenza kuma-macOS 10.14 ukubheka phambili, noma kuzinguqulo zeWindows eziphakeme kuneWindows 7.
Akungabazeki ukuthi ithathwa njengethuluzi elichazayo emihlanganweni yethu yomsebenzi ngenxa yekhwalithi yemakrofoni yayo kanye nokusebenza okunhlobonhlobo okusinikeza kona, uma uthatha isinqumo sokubheja i-Anker PowerConf C300 ngaphandle kokungabaza ngeke ube nephutha, kuze kube manje, okuhle kakhulu ukuthi sizamile. Ithole kusuka kuma-euro ayi-129 ku-Amazon noma kuwebhusayithi yayo.
Kuthunyelwe ku: 1 Juni ka-2021
Ukulungiswa kokugcina: May 27 we-2021
Izinto ezisezingeni eliphakeme nokuklanywa
Ikhwalithi yesithombe enhle kakhulu
Ukubanjwa komsindo okuhle nokugxila kwe-autofocus
Isoftware ethuthukisa ukusebenziseka nokusekelwa okuhle
Isikhwama sokuphatha asikho
Isoftware ingesiNgisi kuphela
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-Anker PowerConf C300, i-webcam ehlakaniphile nomphumela wobuchwepheshe
I-TuLotero yethula uhlelo lwayo olusha olulindelwe ku-Google Play
I-Huawei Band 6, i-smartband ephelele kunazo zonke emakethe [Ukuhlaziywa]